Raharaha volamena 73,5 kg : Olona fito namoahana didy fikarohana – Free News
lundi, 18 octobre 2021 - 9:10
Efa nandray fepetra hentitra ny Fitondram-panjakana.
Accueil/Songadim-baovao/Raharaha volamena 73,5 kg : Olona fito namoahana didy fikarohana
Raharaha volamena 73,5 kg : Olona fito namoahana didy fikarohana
Taorian’ny filazan’ny Tendrom-pitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac) fa miisa 18 ireo olona voarohirohy, manoloana ilay « Raharaha volamena » tra-tehaka tatsy Afrika Atsimo, milanja 73,5 kg. Omaly dia nivoaka ny didy fikarohana olona fito, teo anivon’ny Sampandraharaha misahana ny « Police judiciaire » eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena. Mitohy ny fanadihadiana…
Rado Harivelo 30 janvier 2021
Ireo volamena naondrana an-tsokosoko.
Navoakan’ny teo anivon’ny Kaomandin’ny zandarimariam-pirenena, tamin’ny alalan’ny Sampandraharaha misahana ny « police judiciaire » na ny DPJ ny filazana didy fikarohana ireo olona fito voarohirohy tamin’ny raharaha volamena 73,5 kg, omaly. Toa izao ny mombamomba azy ireo : Andrafendrianana Amstrong, teraka tamin’ny 28 desambra 1974 tao Befelatanana, Antananarivo IV, toerana nipetrahany, tao ami’ny Lot II M36 C Mahavoky Besarety, Tana III. Ny iray faharoa, dia vehivavy antsoina hoe : Saady Fanohizana, izay nipetraka tao amin’ny Lot 97 A Bis Amporopotsy Talatamaty ; ny fahatelo, Ben Hassan Salimo, teraka tami’ny 22 novambra 1977, tao Sambava ary nipetraka tao amin’ny Lot APP 22 Cité Planton Ampahibe. Ny Fahefatra, dia Mahamodo Saïd teraka tamin’ny 9 Mars 1984 tany Antsiranana, ny toerana nipetrahany dia tao amin’ny Lot 083 Grand Pavois Antsiranana ; ny fahadimy, Azaly Failaza Pacheco, teraka tamin’ny 3 Mey 1982 tao 67 ha Antananarivo, nipetraka tao amin’ny Lot N°689 67 Ha Afovoany Andrefana, Antananarivo I. Ny fahenina, dia i Toky Nathan fantatra amin’ny anaraka hoe Teddy, teraka tamin’ny 18 septambra 1980 tany Antsirabe, nipetraka tao amin’ny Lot IVJ 100 Ter Mandialaza Ankadifotsy Antananarivo III. Ary ny fahafito farany, Andrianantenanambinintsoa Pierre Stenny, teraka tamin’ny 26 desambra 1997 tao Ivato Ambohidratrimo, ny adiresy farany nahitana azy dia tao amin’ny Lot IIB 261 Mahalavolona. Antony hikarohan’ny Zandary azy ireo ny raharaha momba ilay fitondrana sy fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena nivoaka, tamin’ny alalan’ny taratasy tsy marina. Teo koa ny fanaovana hosoka sy fampiasana hosoka ny taratasim-panjakana, ny fanaovana kolikoly mivantana sy ankolaka, ny tsy fanajana ny famerenana ny vola vahiny. Isan’ireo karohina momba ilay raharaha volamena 73,5 kg izy ireo. Nilaza ny avy amin’ny Zandarimariam-pirenena fa raha misy mahita azy ireo na mahafantatra, dia hampilaza ny Sampandraharaha misahana ny « Police Judiciaire » amin’ny alalan’ny laharana finday 03414 679 47 na ny 034 14 006 23, eo anivon’ny Kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena.
Tsy misy idiran’ny mpitondra fanjakana…
Hentitra ny filazan’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena omaly, tamin’ny fahitalavitra tsy miankina iray, fa « tsy misy idiran’ny mpitondra fanjakana ny resaka fanondranana an-tsokosoko volamena sarona tatsy Afrika Atsimo io. Iza ireo olona mitady ny hamoahana ireo mpanamory anankiroa, fa tsy ireo mpanohitra fanjakana anie ? ».
Tsy misy idiran’ny Filohan’ny Repoblika mihitsy ny resaka fahatrarana fanondranana an-tsokosoko volamena sarona io. « Ny Filoha aza dia nametraka andraikitra tamiko ary nanome toromarika manokana ahy, momba ny ady amin’ny resaka mpanondrana an-tsokosoko volamena ireo. Ireny resaka fanaovana fakana an-keriny teto an-drenivohitra ireny, dia ry zareo samy mpanondrana an-tsokosoko volamena no tena ao ambadika ireny », hoy izy nanazava. Misy milaza fa trondro madinika ireo tratra ireo. Tsy niolaka ny Seg Jly Ravalomanana Richard nilaza fa misy mpanefoefo ireo olona tratra ireo, ary tokony hanaovana fanadihadiana manokana ny momba ny haren’izy ireo.
Ireo olona namoahana didy fikarohana :
VALANARETINA COVID-19: 31 ireo tranga vaovao tao anatin’ny herinandro
TETIBOLAM-PANJAKANA 2021 : Lany nasiam-panitsiana teny amin’ny antenimiera roa tonta